Accueil > Gazetin'ny nosy > Vahoaka malagasy: Hatramin’ny oviana no hanaiky habadoan’ny mpitondra?
Vahoaka malagasy: Hatramin’ny oviana no hanaiky habadoan’ny mpitondra?
Tany amin’ny taon-jato taona vitsy talohan’ny naterahan’i Jesosy Kristy dia efa nisy ny fomba fitenin’ireo Romàna hoe: “Ny mpitondra fanjakana sambatra indrindra eto an-tany dia ny mpitondra manana vahoaka bado”. Tena mitombina io fitenin’ny Romànina io satria rehefa bado ny vahoaka iray dia na inona na inona hadalana ataon’ny mpitondra azy dia manaiky na dia hita mibaribary izao aza fa tsy mety. Aty amin’ny taon-jato taona faha 21, mbola maro ny firenena no ahitàna taratra an’io voalazan’ny Romànina io ka tafiditra ao anatin’izany i Madagasikara. Ny zava-nitranga teto amin’ny firenena, tao anatin’izay 4 taona nitondran’i Hery Rajaonarimampianina izay, dia manaporofo fa mamela ny mpitondra hanao izay tiany ny Malagasy. Ohatra vitsy azo raisina: nanitsakitsaka ny andininy faha 54 ao anatin’ny Lalàmpanorenana i Rajaonarimampianina tamin’ny fanendrena ny praiminisitra Kolo Roger, tsy mba nanohitra izany ny Malagasy fa nanaiky. Tamin’ny 9 aprily 2016, nandainga ampahibemaso ny sekretera jeneralin’ny fiadidiana ny repoblika izay nanambara fa nametra-pialàna ny praiminisitra Jean Ravelonarivo, tsy taitra ihany koa ny Malagasy. Tapitra amidin’ny mpitondra amin’ny vahiny ny tanindrazana, mimenomenona fotsiny ny vahoaka fa tsy misy ny andraikitra raisina. Ohatra vitsy fotsiny ireo voalaza teo ireo fa tsy ho voatanisa eto daholo ny hadalan’ity fitondrana Rajaonarimampianina ity, tao anatin’ny 4 taona. Tsy mahagaga raha toa ka tsy mitsahatra ny manao ny ataony foana ireo mpitondra eto amintsika satria vahoaka tsy mba masiaka tahaka ny vahoaka any amin’ireo firenen-kafa, indrindra fa any amin’ireo firenena mandroso ny vahoaka Malagasy. Ny olana ho an’ity Madagasikara ity dia tsy mba tapa-kevitra ny hihetsika na hidina an-dalambe ny vahoaka raha tsy efa tena tonga amin’ny fara-tampony ny hadalana na ny zavatra tsy mety ataon’ny mpitondra. Fomba fanao tsy mety anefa izany ary noporofoin’ny tantara. Raha ny tokony ho izy, ary izany no fahita any amin’ny firenen-kafa, vao misy tsy mety kely ny ataon’ireo mpitondra fanjakana dia midina an-dalambe maneho ny hatezerany ny mponina. Endrika iray azo itarafana fa mihevitra ny Malagasy ho bado ihany koa ny mpitondra eto amintsika ny filazana zavatra izay fantatra ny rehetra fa tsy mitombina, eo ihany koa ny fandrebirebena tahaka ireny nation-dRajaonarimampianina teny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha ireny, ny 25 desambra lasa teo. Eo amin’ny 10 volana eo moa sisa farafahatarany dia hiroso amin’ny fifidianana filoham-pirenena isika eto Madagasikara ka azo antoka fa mbola ho avy ny karazana fandrebirebena sy fampiesonana vahoaka maro samihafa avy amin’ireo mpitantana ny firenena. Mirazotra amin’izay anefa dia mbola hitazam-potsiny ny Malagasy ary hanaiky ny fanabadoana ataon’ireo mpitondra azy.
Manoloana izany indrindra dia mipetraka ny fanontaniana: “hatramin’ny oviana no hanaiky habadoan’ireo mpitondra ny vahoaka Malagasy? Rahoviana vao mba hitovy amin’ny vahoaka any amin’ireo firenena mandroso ka tsy hanaiky intsony ny hadalana ataon’i Hery Rajaonarimampianina sy ny forongony?” Rehefa masiaka ny vahoaka, azo antoka fa tsy maintsy mandroso ny firenena satria na ireo mpitondra fanjakana aza dia hitandrina mafy amin’ny zava-drehetra ataony eo amin’ny fitantanana ny firenena.
Dahalo tao Ambondromisotra: Niala maina ny zandary sy miaramila 10 lahy
Tamin’ny alakamisy faha 25 janoary 2018 tamin’ny 11 ora atoandro no notafihin’ny dahalo ny kaominina ao Ambondromisotra, distrikan’Ambatofinandrahana. Raha mbola teny ampiarakandrovana avokoa ny tao amin’ity kaominina ity dia navorin’ny dahalo ny omby rehetra. Ombin’olona maromaro ireo. Tsy nisy niarakandrovana koa ny teny akaikin’ny tanàna fa tsy maintsy namonjy ny kijana miala 1 km andrefan’ny fonenana ny mpiarakandro satria tototra ny rano ny toerana rehetra. Marihina fa dibo-drano tanteraka ny toerana misy ny tanànan’Ambondromisitra ity noho ny fahavakisan’ny fefiloha tamin’ny rivodoza Ava iny. Nohararotin’ny dahalo izany fahavoazana izany ka izao notafihiny izao ny kaominina. Mbola olana ihany koa ny làlana mandeha any amin’ity toerana ity satria tetezana roa no lasan’ny rano farany teo iny. Mitoka-monina tanteraka Ambondromisotra sy Soavina noho izany.
Dahalo miisa 32 no nanafika. Mitondra basy kalaky sy « mas-36 » avokoa izy rehetra ireo hoy ny loharanom-baovao. Tonga namonjy ny fokonolona ny zandary teo Ambondromisotra ao amin’ny “poste fixe”. Miisa enin-dahy izy ireo no tonga dia nandray andraikitra. Tonga koa ny miaramila efa-dahy avy ao kaompania 202 ao Soavina. Ireo rehetra ireo dia niampy vatan-dehilahy misay efa-jato tany ho any.
Raikitra ny fanarahan-dia, nifankahita sy mifanenjika ny roa tonta. Mifamalivaly ny fifampitifirana sy ny ady. Tsy mety lany ny balan’ireto dahalo ireto. Tsy afaka nanao na inona ny vahoaka sy ireo zandary ary ny miaramila nanao ny fanenjehana. Nanapa-kevitra ny hiverina izy ireo noho ny hery tena tsy mitovy. Nentin’ny dahalo niakandrefana nahazo ny kaominina Itremo sy Mangataboahangy ny omby azony. Soa ihany fa tsy nisy maty ny mpanara-dia hoy ny loharanom-baovao. Toa ireny sinema ireny no hita teny amin’ny toerana nandehan’ny dahalo ireto hoy ihany ny loharanom-baovao.
Manomboka indray amin’izao fotoana ny fanafihana mahery vaika ataon’ny dahalo. Lasibatra ny ao Soavina sy Ambondromisotra izay nanana fikambanana natanjakabe tsy noazon’ny dahalo nidirana tao anatin’ny taona vitsy izao.
Miantso ny mpitondra fanjakana ny mponina any an-toerana hijery maika ity asan-dahalo mahery vaika ity.